IVidiyo yokuFakwa kweeModyuli zeAirwoods
Ubungakanani beVidiyo yeeModyuli zeOfisi: 3m * 4m * 2.5m Iofisi ezimiselweyo zinokuhamba ziye nakwezinye iindawo, ziguquguquke kwaye zilungele. Ukufaka kunye nokudibanisa kunokugqitywa phantsi kwemizuzu engama-30. Sithengisa kuwo onke amazwe kwihlabathi liphela, wamkelekile ukuthumela imibuzo yakho kunye neemodyuli zakho ezifanelekileyo ...
UMATSHI EXPO ALIBABA INDLELA YOKUPHILA YOKUPHILA: IPPE Imveliso yeCoceko lokucoca
Izihloko zokuGubungela i-Liveshow: 1.Kutheni i-Cleanroom Iba sisihloko eshushu 2.Inkqubo yokuHamba kobuso beMask yokuThengisa 3.Ukucaciswa koLwakhiwo lweCleanroom 4.Cleanroom HVAC System Intshayelelo ngo-Matshi i-Expo ye-Exclusive: 1.I-Freeroom yokuqala yoyilo 2.Free AHU Sele .. .
Ngomhla wango-Matshi u-Alibaba Liveshow Replay: Inkonzo yokuCoca i-PCR
I-Liveshow Imixholo yokugubungela: 1. Ingcinga yegumbi lokucoca i-PCR 2. Isicelo sokucoca indawo yokucoca i-PCR 3. Ukwakhiwa kwegumbi lokucoca kunye nezixhobo 4. Umboniso wevidiyo ococekileyo we-3D 5. Imfuno ye-PCR yokucoca i-HVAC 6. Umboniso we-PCR wegumbi lokucoca u-Matshi uMboniso oKhethekileyo: 1 ....
Ngomhla wango-Matshi u-Alibaba Liveshow Replay: ICandelo lokuLawulwa komoya kuMoya weHoltop
Izihloko eziGubungelayo ze-Liveshow: 1.Holtop Industrial AHU isishwankathelo 2.Ukuma kweHoltop ye-AHU yolwakhiwo kunye nezibonelelo 3.AmaHoltop Amashishini e-AHU azisa nge-4.Holtop ye-AHU yesicelo se-5.Ityala leProjekthi yaseKhaya: Intsebenziswano yeMercedes Benz kunye neHoltop 6.Ove ...
I-Alibaba kaMatshi yoPhononongo lokuDlala kwakhona: Uhlobo lweAirwoods yokufaka isilingi sokucoca umoya
I-Liveshow Imixholo yokuGquma: 1. Itekhnoloji yokucoca umoya yokucoca umoya i-Airwoods 2. Isicoci, i-AHU, i-ERV, ukuthelekisa i-AC 3. Ukufakelwa kohlobo lokucoca umoya Ukucoca 4. Umbuzo oqhelekileyo kunye neempendulo ngoMatshi uMboniso oKhethekileyo:
Ukudlala kwakhona iAlibaba ngoMatshi: Ukwanda ngokuthe ngqo kweYunithi yokuPhatha umoya
Ngomhla wango-Matshi u-Alibaba Liveshow Replay: Imixholo: Ukwandiswa ngokuthe ngqo kwe-Holtop i-AHU yokuGquma izihloko kunye nexesha: 1.Yintoni i-AHU? 01:24 2.Ukwandiswa ngokuthe ngqo kwe-AHU vs Amanzi apholileyo AHU 02:08 3.Ukwandiswa ngokuthe ngqo kwe-AHU Izibonelelo 07:17 4.Uhlobo lokuPhela kweHoltop DX AHU 11:00 5.Holdop Floor ...
IHoltop Rewind 2020: Iiprojekthi zeSibhedlele esiBhubhane
Ukujongana nokuqhambuka kwesi sifo, uHoltop akoyiki mngeni. Kwidabi lokulwa ubhubhane, i-HOLTOP igxile kubasebenzi kunye nezixhobo, ziyile kwaye zavelisa izixhobo zokucoca umoya, kwaye zibonelela ngemveliso yomoya entsha ...
Ukubingelela koNyaka oMtsha ka-2021
Iiholide zinokubonakala ngathi zityhafisa ngakumbi kulo nyaka ngayo yonke into eqhubekayo. Ubhubhane uyaqhubeka nokugcina umhlaba urhanelekile kwaye iziphumo zivakala kuthi sonke, ngasese nangobungcali. Enkosi kakhulu ngokusithemba kwakho, ukuqonda kwakho.
I-Airwoods Webinar: Uyilo loCoceko kunye noKwakha ukuThengiswa kweMaski
Njengokusasazeka okumangalisayo kweCovid-19, isidingo semaski esilahlayo sihlala sisanda. Uninzi lwabathengi olujonga ukwenziwa kwemaski, kwaye siyaqonda ukuba banemibuzo emininzi ukuba bayifaka kwigumbi lokucoca okokuqala. Yiyo i ...
IZiko loLawulo lweZifo PCR Igumbi lokucoca ukhenketho olubonakalayo
Joyina abaphathi beprojekthi yethu uWayne kunye nezilwanyana ukufumana ukhenketho lwenyani kwigumbi lethu lokucoca i-ISO 8 le-PCR kwiziko lolawulo lwezifo. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ngolwazi oluthe kratya lweeprojekthi. Iprojekthi: IZiko lokuCoca iPC lokuCoca iZifo; Isicelo: Iintsholongwane zovavanyo T ...
Iprojekthi yeAirwoods: Igumbi lokucoca iMask elahlwayo
Isicelo sokucoca igumbi lokucoca: Ukulahlwa kweMaski yokuSebenza kweFektri Indawo yonke: 546m2 Indawo yokuCoca igumbi: 440 m2 Indawo yokuGcina igumbi lokucoca: Imveliso yokusebenzela, Igumbi lokuTshintsha iNdoda / labasetyhini, Igumbi lokuhlamba izandla, iPaseji, Igumbi lezixhobo, Igumbi lempahla ekrwada, igumbi lokukhupha impahla, Inkunkuma Roo .. .
Iiprojekthi zeAirwoods: IZiko loLawulo lweZifo iPCR yokucoca igumbi
Iprojekthi: IZiko lokuCoca iPC lokuCoca iZifo; Isicelo: Iintsholongwane zovavanyo ukufumanisa isifo; Inqanaba lokucoceka: Inkqubo ye-ISO 8 HVAC: i-100% yeeyunithi zokuphatha umoya omtsha + iiyunithi zokujija ixesha lokwakha: Iintsuku ezingama-30 indawo yokwakha: 150m2 Ukusukela ngo-2007, iAirwoods ezinikele ...